Isinxibo samadoda, ibhatyi eboyiweyo, impahla yamadoda - Hengqianxiang
Intuthuzelo, ukuSebenza okuPhakamileyo, iNoveli
Isinxibo samadoda asebusika afudumeleyo asebusika afanelekileyo ...
I-Shell 100% ipholiyesta Lining 100% ipholiyesta Ukuzalisa i-90% idada phantsi, i-10% yeentsiba Ubungakanani Nawuphi na ubungakanani obufumanekayo Umbala Nawuphi na umbala uyafumaneka Olunye ucoceko lwangempela lwe-raccoon Imveliso yokwazisa La madoda ebusika ibhatyi efudumeleyo. Uyilo lwelinen eyahlukileyo yoyilo lwenza ibhatyi encinci. Uboya obukhulu be raccoon bugcina umoya. Iimpawu zemveliso zifudumele ngokugqibeleleyo, inguqulelo elungileyo.
Factory Ihowuliseyili Men Apparel Iimpahla Fashional ...
I-Shell 100% ipholiyesta Lining 100% ipholiyesta Ukugcwalisa i-90% idada ezantsi, i-10% yeentsiba Ubungakanani Nawuphi na umlinganiselo okhoyo Umbala Nawuphi na umbala uyafumaneka Ukwaziswa kweMveliso. uyilo loboya begusha oludumileyo. Imveliso inezinto ezinobunzima bokukhanya, obutofotofo, obunesitayile
Factory yoMvelisi Men Apparel Casual Wear Sh ...
I-Shell 98% yomqhaphu, i-2% ipholiyesta yokuGquma i-100% ipholiyesta, Ukulinganisa iigusha uboya Ukuzalisa i-100% ipholiyesta Ubungakanani Nawuphi na umlinganiselo okhoyo Umbala Nawuphi na umbala uyafumaneka Ukwazisa kweMveliso Umgangatho olungileyo womqhaphu welaphu wenza ibhatyi ibanga eliphezulu. Ibhatyi iza isikwe ngokuqaqamba okulingana nomzimba wakho ngokugqibeleleyo, kwaye ikwenze ubonakale udidi kwaye umhle.i-50% yoboya ikwenza uzive ufudumele ebusika okanye ekwindla. Iimpawu zeMveliso ziSitayile, zifudumele, zingangeni umoya, ubunzima bokukhanya okhethekileyo kunye nezinto ezishushu.
Umvelisi weFektri osesikweni oFutshane weWole Men Men
I-Shell 100% ipholiyesta Lining 100% ipholiyesta Ukugcwalisa i-100% ipholiyesta Ubungakanani Nawuphi na umlinganiselo okhoyo Umbala nawuphi na umbala uyafumaneka Ukwaziswa kweMveliso Umgangatho olungileyo woboya belaphu wenza ibhatyi ibanga eliphezulu. Ibhatyi iza isikwe ngokuqaqamba okulingana nomzimba wakho ngokugqibeleleyo, kwaye ikwenze ubonakale udidi kwaye umhle.i-50% yoboya ikwenza uzive ufudumele ebusika okanye ekwindla. Iimpawu zemveliso Inguqulelo elungileyo, engangenwa ngumoya, eshushu.
Amadoda Iimpahla ezisesikweni zinxibe ibhatyi ende yokuqhekeza umoya
I-Shell 100% yomqhaphu ukugoba i-100% yePolyester Ubungakanani Nawuphi na umlinganiselo okhoyo Umbala nawuphi na umbala uyafumaneka Ukwazisa kweMveliso uyilo olunamabele aphindwe kabini, umhombiso weBelt. Inguqulelo encinci kunye nexesha elide ikwenza ubonakale ubabalo. Iimpawu zemveliso Inguqulelo elungileyo, engangenwa ngumoya, eshushu.
100% ipholiyesta Windproof Custom amadoda Mfutshane Bombe ...
I-Shell 100% i-polyamide Lining 100% ye-polyester Ubungakanani Nawuphi na ubungakanani obufumanekayo Umbala Nawuphi na umbala uyafumaneka Ukwazisa ngemveliso Le mpahla iza nemibhobho emnyama, kwaye ibonisa ubuchule kunye nokuma okwangoku. Ipokotho evaliweyo engalweni ibekwe ngokukodwa, kwaye yongeza ifunk kwimpahla elula. Yenziwe ngomgangatho ophezulu wokungena manzi kunye nelaphu elingumoya.Kulungele ukunxiba ngaphandle nangaphandle. Iimpawu Product Manzi kunye engangenwa, ngokukhawuleza owomileyo.
Intengiso eshushu yasebusika Abafazi Iimpahla Fashional Phantsi C ...
I-Shell 100% i-polyamide Lining 100% ipholiyesta Ukuzalisa i-90% idada phantsi, i-10% yeentsiba Ubungakanani Nawuphi na ubungakanani obufumanekayo Umbala Nawuphi na umbala uyafumaneka Abanye Ukwaziswa kwemveliso I-pink Down Down Jacket yenzelwe ngokugqibeleleyo ukulwa ubusika obunzima ngaphandle kokuthoba umthwalo. Ibhatyi ifakwe kubuchwephesha obomileyo obomeleleyo bokumelana namanzi kunye nokuxhathisa okuphezulu ekuphulukaneni nobushushu bomzimba. Izinto zebhatyi zikhululekile kwaye zolula phambi kokuba kube lula ...
Sport Outwear ibhatyi Ihowuliseyili wome wena ...
Intshayelelo yemveliso Le bhatyi yezemidlalo ikulungele kakhulu ukuphuma ngaphandle. Ilaphu alinamanzi kwaye lome ngokukhawuleza. I-zipper nayo ayinamanzi, akukho ngxaki ngemvula encinci ngaphandle, amalaphu aphefumlelweyo avumela ukubila ukuba kuphume ngokukhawuleza. Iimpawu zemveliso 1. Iyahlala kwaye ihlala kamnandi. 2. Ukolula ngokufanelekileyo. Ubunzima bokukhanya okhethekileyo kunye nezinto ezishushu. 4, Ilungile imisebenzi yangaphandle kwintwasahlobo nasekwindla. Ukuba uyayithanda imibala, ke le ibhatyi ikulungele. U ...
Ixabiso lokhuphiswano lomzi mveliso. Silawula lonke ixabiso lendawo ukukunika elona xabiso.
Singakwazi ukuvelisa iiodolo ezincinci kunye neeodolo ezixubeneyo.
Emva kokuba uqinisekise isampula kunye nomyalelo, sinako ukuhambisa iimpahla kwiintsuku ezingama-30.
Inkonzo yolwenziwo olunzulu
Sinokukunceda ukuba uhlakulele izitayile zakho ezintsha ngokomxholo wakho okanye umsebenzi wobugcisa.
Ukunyaniseka, uxanduva, ukuphumelela
Iya kuba yintoni imeko yengubo kunye ne-garme ...
Ukuthengiswa kweempahla zase China kunye neempahla kwakungaqhelekanga kwisiqingatha sokuqala salo nyaka ngenxa yokusasazeka kwe-COVID-19. Ukungena ngoMeyi nangoJuni, ezinye iinkcukacha zithathile. Imeko iyonke ...
Isidlo sangokuhlwa ngaphambi komnyhadala weNtwasahlobo ka-2020, ...
Ekupheleni kuka-2019, siza kushwankathela umsebenzi wonyaka ophelileyo, kugxininiswa ngokukodwa kwiingxaki emsebenzini, kwaye wonke umntu makakhumbule ukwenza umsebenzi ongcono kuNyaka oMtsha.
Umgangatho wokuqala, uMthengi phambili